चित्लाङ–थानकोट सडक छ महिनामै निर्माण सकिएला त ?
‘ऊ, त्यो ब्यानर हेर्नुस्, अब त्यही हालतमा पु¥याइदिनूस्’–मकवानपुर थाहानगर चित्लाङका राजन बस्नेतले अक्रोस पोख्दै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने–‘गाडी बोक्ने बाटैको रुपमा परिचित भएको भए बरु विश्वले थाहा पाउँथे, हेर्न पर्यटक आउँथे।’ बस्नेतको यो ब्यङ्ग्य र आक्रोस चित्लाङमा भएको कार्यक्रमको हो । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलको विशेष उपस्थितीमा भएको कार्यक्रममा पर्यटन व्यवशायी समेत रहेका बस्नेतले यस्तो दुखद् आक्रोस पोखेका हुन् । मन्त्री फुयाँल गणेशमान सिंह मार्ग (चित्लाङ–थानकोट) र चित्लाङ–दामन सडकको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी चित्लाङ आएका थिए । मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थियो, चित्लाङ–थानकोट सडक खण्ड तत्कालै निर्माण सम्पन्न गरी सुचारु गराउने । यसका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा स्थानीयहरुले मन्त्रीसहित सांसद तथा जनप्रतिनीधिहरुको माझ आफ्नो आफ्नो भनाइ राखे । उनीहरुको एउटै माग र स्वर थियो –‘सडक बन्नु प¥यो ।’
‘चित्लाङ–थानकोट सडक सुचारु भए एकै घण्टामा काठमाण्डौंको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्न सकिन्थ्यो, त्रिभुवन राजपथहुँदै नौबिसेबाट गए पाँच घण्टा लाग्छ, अनि विरामीले बाटैमा प्राण फाल्नूको विकल्प छैन’–चित्लाङका राजेन्द्र बलामीले दुःख सुनाए । बलामीले भने–‘काठमाण्डौसम्म तरकारी ढुवानी गर्दा किलोकै ३÷४ रुपियाँ तिर्नुपर्छ, चित्लाङ सडक बने १ रुपियाँमै पु¥याउन सकिन्थ्यो, बाटो चाँडै बनाइदिनूस् ।’ सबैको साझा सरोकारको रुपमा रहेको । चित्लाङ–थानकोट सडक नबने, मन्त्री सांसद र नगरका जनप्रतिनीधिहरुलाई समेत राम्रो नमान्ने बताउँदै उनले ख्याल गर्न चुनौति दिए ।
थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १० को वडा सदस्य दिपक गोपालीले चित्लाङ–थानकोट सडकलाई भोटको थैलो नबनाउन आग्रह गरे । टौखेल निवासी गोपालीले भने–‘निर्माण व्यवशायीकै कारण सडक नबन्ने अनि नेताहरु आएर म बनाउँछु, मैले यो गरे, त्यो गरेँ भनेर भोट माग्ने थलोको रुपमा विकास भैरहेकोले त्यसो गर्ने अधिकार कसैको छैन ।’ निर्माण ढिलो हुँदै जाँदा त्यसको पहिलो अपजस निर्माण व्यवशायीले नै लिनूपर्ने उनको भनाइ थियो । चित्लाङका कर्ण गोपालीले सडकको निर्माण संरचना गतिलो नभएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुनाए । डिजाइन गर्दा त्यसको संरचनाको दीगोपन र दीर्घकालिन प्रभावकारितालाई पटक्कै ख्याल नगरेको गोपालीको भनाइ थियो ।
सांसदको जवाफ क्लियरकट् !
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनाराण विडारीले चित्लाङ चन्द्रागिरी सडक नबन्नुको पछाडी ठेक्का अंक ‘बिलो’ हुनु प्रमुख कारक तत्व भएको बताए । देशमा हजारौ सडक बने, तर सडक बनाउँदा निश्केको ढुुङ्गा वनले ठेक्का लगाउने कुनै नजिर नभएको बताउँदै यै सडक निर्माणमा वनलाई ढुङ्गाको आम्दानी चाहिँने अचम्म र चकित पार्ने काम भएको विडारीको भनाइ थियो ।
सडक बन्दा सबै जस लिन सर्ने नबन्दा अरुलाई आरोप लगाएर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सांसद विडारीको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति समेत रहेका विडारीले भने–‘सडक बनाउँछु भन्ने सँधै अल्झिरहने यो प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि संघीय अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवलाई काठमाण्डौं पुगेर ¥याख¥याख्ती पार्छु ।’
बागमती प्रदेश सांसद कुमारी मोक्तानले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बाटो निर्माणमा बजेट अभावमा निर्माण सक्न कठीन हुने भएकोल संघबाट छिटो बन्ला भनेर निर्णय गरेर पठाएको हालत उस्तै भएकोमा दुख व्यक्त गरिन् । अहिले सडक बनाउने एजेण्डा भन्दा पनि ढुङ्गा बेच्ने एजेण्डाले स्थान लिएकोमा उनको चिन्ता छ ।
उनले सडक नबन्नुको प्रमुख कारण अरु कसैले भन्दा पनि आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवशायीले जवाफ दिनूपर्ने धारणा राखिन् । ‘आयोजना प्रमुखले किन सडक निर्माण अघि बढेन एक, दुई, तीन कारण भन्न सक्नूपर्छ, निर्माण व्यवशायीले पनि आफ्नो कठिनाई भन्नै पर्छ ।’–सांसद मोक्तानले स्पष्ट पारिन् । जब समस्या पहिचान हुन्न तबसम्म निर्माणले गति लिन नसक्ने उनको भनाई थियो । सडक निर्माण हुन नसके त्यसको सम्पूर्ण भागिदार यि दुईपक्ष नै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नीतिगत र कानूूनी समस्या आए त्यसको हल गर्न आफूहरु जहिल्यै तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
सांसद आलेको झिनो आश, ठकुरी खोज्दै जस
काठमाण्डौ–१० की सांसद रमा आले मगरलाई चित्लाङ चन्द्रागिरी सडक निर्माण हुने आशा झिनो मात्र छ । निर्माण भन्दा पनि सडक निर्माणका क्रममा निकै क्षति भएकाले त्यसतर्फ पनि आयोजना र निर्माण व्यवशायीले ध्यान दिनूपर्ने उनले बताइन् । बाटो बनाउने क्रममा भएको ठेक्कामा उत्खनन् भएको ढुङ्गा विक्रिमा सबैको ध्यान गएको उनको भनाइ थियो । प्रक्रियागत रुपमा ढुङ्गा निकासीको टेण्डर भएकोले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता समेत भएको हुँदा ढुङ्गा निकासीको वातावरण सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफू अविवहित समेत रहेकोले कोही कसैसंग लोभ लालच नभएको बताउँदै टेण्डरमा परेको सामान लैजान दिने विषयमा सबै सहमत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सडक विस्तारसंगै चन्द्रागिरी क्षेत्रमा रहेको वस्तीमा परेको असरलाई ध्यान दिएर विकास गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा पूर्व सांसद तथा संविभानसभा सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण गरी निर्माण थालिएको सडकलाई विकास गर्न कसैले रोक्नू नहुने बताए । सडक विस्तारका लागि आफूले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउँदै निर्माण पूरा गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने उनको भनाइ थियो । ठकुरीले निर्माण व्यवशायीलाई काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने बताए । उनले आफू सांसद हुँदा निर्माण प्रारम्भ भएकोले निर्माण सम्पन्न गर्न पनि आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका हुने जिकिर गरे ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रीको ११ बुँदे निर्देशन
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले चित्लाङ–थानकोट सडक निर्माणका लागि ११ बुँदे निर्देशनसहित कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री फुयाँलले सडकलाई पूर्णता दिन के के आवश्यक पर्छ कार्य योजनासहित मन्त्रालयमा पेश गर्न भनेका छन् । यसका लागि ७ सदस्यीय कमिटि निर्माण गरेका छन् ।
कमिटिमा रामशरण नेपाल, दिपक गोपाली, विजय वस्नेत, सुनिलकुमार गुरुङलगायत छन् । सडक निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि गठित समितिले सातदिनभित्र कार्यतालिका तयार गरी काम थाल्न मन्त्री फुयाँलले आग्रह गरेका छन् । उनले यसका लागि आवश्यक सबै सहयोग मन्त्रालयले गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । मन्त्री फुयाँलले १५ दिनभित्र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसंग एकीकृत बैठक बस्ने ‘सेड्युल’ अन्तरक्रियामा सुनाए ।
उनले सडकको पूर्वाधार निर्माण सक्ने कुरामा शंकै नगर्न आग्रह गरे । निर्माण कार्यबाट भाग्न, उम्किन कसैलाई छुट नभएको उनको धारणा थियो । प्रचीन सडकलाई निर्माण सक्ने सवालमा सबै एक हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । योजना सक्नका लागि सडक आयोजनालाई क्रमागत रुपमा बजेटको व्यवस्था गर्न आफू अग्रसर हुने उनको प्रतिवद्धता थियो । केही महिनाको लागि नभई दीगो रुपमा संचालन हुने व्यवस्था मिलाउने बताउँदै उनले भाद्र मसान्तभित्रमा सडकमा राम्रोसंग यातायात संचालन भैसक्ने आश्वासन बाँडे ।
अहिलेको कामको समिक्षासंगै सफलतकाो मुस्कानसहित पौष २९ गते सडक निर्माणको समिक्षा हुने उनको कार्य तालिका छ । उनले यहि समितिलाई आधार बनाएर १५ देखि १७ सदस्यीय सरोकार समिति गठन गर्न पनि आग्रह गरे । उनले दोहो¥याउँदै भने–‘पौष मसान्तमा असंभव केही नभएको प्रमाणसहित सडकमा गाडी गुडेको हेर्दै समिक्षा गर्दा सबैको मुखमा मुस्कान पाउने पक्का छन ।’
ठेकेदारको टक्कर, ढुङ्गामै रहर
गणेशमान सिंह मार्ग (थानकोट–चित्लाङ) सडक योजनाका निर्माण व्यवशायी (ठेकेदार) बाटो निर्माणका क्रममा निश्केको ढुङ्गा व्यवस्थापन नभएकै कारण निर्माणमा बाधा परेको निर्माण कम्पनी पिएस किराँतेश्वर जेभीका सनकसिं राईले बताए ।
सडक निर्माणका क्रममा निश्केको ढुङ्गा निकासीका लागि वन कार्यालय मार्फत ठेक्का भैसकेको भएपनि निकासीमा स्थानीयले अवरोध पु¥याएको कारण समस्या भएको राईको भनाइ छ । उनले ढुङ्गा राख्ने ठाउँको अभाव पनि भएको र निकासीमा पनि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले अवरोध गरेको गुनासो गरे । अन्तरक्रियामा उनले आफूले चाहेर पनि सडक निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको बताए ।
सडक निर्माणका क्रममा उत्खनन् भएको ढुङ्गा तुरुन्तै निकासी गर्ने मनसाय व्यक्त गर्दै भन्छन्–‘जब ढुङ्गा निकासा गर्न पाउन्न तबसम्म सडक निर्माण अघि बढ्दै बढ्दैन ।’ उनले थपे–‘कि ठाउँ देऊ कि निकासी गर्न देउ ।’
स्थानीय जनप्रतिनीधि सडक निर्माणकै पक्षमा
चन्द्रागिरी नगरपालिकाका उप मेयर लिशा नकर्मीले थानकोट सडक निर्माणको पक्षमा शुरुबाटै रहेको बताउँछिन् । निर्माण व्यवशायीको अटेरी प्रवृत्तिका कारण सडक विस्तार हुन नसकेको उपप्रमुख नकर्मीको भनाइ छ । सँधै म्याद मात्र थप्ने काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सडक बनाउनु भन्दा पनि ढुङ्गा बेच्ने खेलमा केन्द्रित निर्माण व्यवशायीबाट सडक निर्माणको आशा त्यान्द्रोमा परिणत हुने खतरा रहेको औल्याइन् । उममेयर नकर्मीले भनिन्–‘ढुङ्गा निकासी गर्ने विषयमा मुद्दाको छिनोफानो नभएकोले अहिले ढुङ्गा नापजाँच गरेर एक ठाउँमा राखेर सडकको काम थाल्नू पर्छ ।’ सम्झौता अनुसार सडक निर्माण गर्न ढुङ्गा नै बाधक नभएको उनको भनाइ छ ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका ४ नम्बर वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद खड्गीले ढुङ्गाकै कारण बाटो निर्माण रोकिनू नहुने बताउँदै भण्डारको लागि ठाउँ दिन तयार रहेको बताए । अध्यक्ष खड्गीले भने–‘मलाई एकघण्टा अघि भन्नुस् म सबै ढु¬्गा राख्ने ठाउँ दिन्छु, तर सडक निर्माण रोकिनू भएन ।’ ‘स्वार्थ र अन्तरद्वन्द्धले सडक निर्माण रोकिनू ठूलो अपराध हुनेछ, हामीले सहयोग गर्ने ठाउँमा चुक्दैनौ, विकास रोक्न दिन्नौं, उनले थपे–‘बरु कुनैपनि निकायले सडक निर्माण गर्न सक्नुहुन्न भने भन्नूस, हामी चन्द्रागिरी र थाहा नगरपालिका यो सडक बनाउन सक्षम छौं ।’
थाहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख लवशेर विष्टले सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले कार्यक्रममा पेश गर्नुभएको कार्यतालिका वरै निर्माण सक्ने गरी काम गर्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई सुझाव दिए । १५ महिनाको ठेक्का सम्झौता मिति थप्दै थप्दै ५ वर्ष पुग्न थालिसकेको बताउँदै अब म्याद थपेर नथपी काम सक्नतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
अब पनि थपेको म्यादमा काम नसकिए आयोजना प्रमुख यसको जिम्मोरी लिन तयार हुनुपर्ने बताए । मन्त्रीले सडकको अपनत्वका लागि सार्वजनिक निर्माण कार्यतालिकाको प्रशंसा गर्दै निर्माण सक्नको लागि आर्थिक र नीतगत सयोग मन्त्रालयबाट हुनेमा मेयर विष्टले अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले सडक निर्माणका लागि चन्द्रागिरी नगरपालिकाको हातेमालोलाई उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।